Apple TV + Inofumura "Behind the Scenes" Vhidhiyo yeayo "See" Series | Ndinobva mac
Apple TV + yakavhurwa 1 of noviembre. Zvinyorwa zvakawanda zvakataura nezve kushambadzira kudiki kuri kuitwa neApple padandemutande rayo rekushambadzira. Apple TV + yakagadzirirwa kukwikwidza ku Netflix uye panguva ino chete shoma muzana yeApple nyika inoziva nezve kuvapo kwayo.
Asi kutanga kushambadzira zviito tanga kuoneka. Kwemaawa mashoma tave ne kusimudzira kwezvakateedzana «Ona» Apple TV +, uko kwatinoona maitirwo akaitwa uye akanyorwa. mabvazuva "Kumashure kwezviitiko", inoratidza kutandara kwenyika ino kunoenderana nenzvimbo yepashure-apocalyptic.
Ona inotaura kuti hutachiona hwabvisa sei hupenyu hwakawanda pasi pano uye vashoma chete ndivo vakapona. Vakapona ava vakapofomara uye vanofanirwa kudzidza kurarama nazvo. Iwo akateedzana nyeredzi Jason Momoa naAlfred Woodard.
Vhidhiyo inoratidza mutungamiriri weakateedzana Francis Lawrence kutaura nezvekuvakwa kwezviitiko zvakasiyana, pamwe nezvivakwa uye nezvimwe zviitiko. Zvichipa kunetsekana kwakawedzerwa kwekuti vatambi venhevedzano vanofanirwa kuita semapofu, mune akateedzana vakave nechikwata chemapangamazano mapofu, kuita kuti mumiriri ave echokwadi sezvinobvira. Izvo zvakanyanyisa kuomarara yaive yekudzidzira mukati nevatambi venzira dzekuita uye hukama pakati pevanhu vane hupofu.
Kana iwe uchiri kusaziva chikuva Apple TV +, ine katarogu yakasiyana, kunyangwe panguva yacho iine zvishoma zvemukati. Tinogona kunyorera € 4,99 pamwedzi kana € 49,99 gore. Zvakaipisisa kana ukatenga Apple TV, Mac, iPhone, iPad kana iPod touch mushure meGunyana 10, unogona kunakirwa gore rimwe mahara yezviri papuratifomu. Apple inotarisirwa kuwedzera iyo katarogu, uyezve ive yemukati chikuva che mamwe masevhisi ekushambadzira. Mushandisi anogona kutora mukana weTV yekushandisa kweApple zvishandiso kutsvaga nekutamba zvemukati mukati meinofadza uye inoshanda kwazvo nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple TV + inofumura kumashure-kwe-zviitiko vhidhiyo yeayo "Ona" akateedzana
Keychron 2: Wireless mechanical keyboard yeMac yakagadziridzwa